Laptop ၀ယ်ရာတွင် သိရမည့်အချက်များ ( အပိုင်း ၁) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » laptop ၀ယ်ယူရာတွင် သိရမည့် အချက်များ , ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ , အထွေထွေ » Laptop ၀ယ်ရာတွင် သိရမည့်အချက်များ ( အပိုင်း ၁)
By သန့်ဇင်ဌေး7:19 AM14 comments
အပိုင်း (၁) ပါဝင်မူ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ။
Tochpad ကိုတော့ လူတိုင်း သိပီးသားပါ အခေါ်အဝေါ်ကို ရင်းနှီးသူလည်း ရှိသလို မရင်နီးသူလည်း ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ သူကို နောက်တမျိုး trackpad လို့လည်းခေါ်သေးသလို pointing device လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ သူကတော့ Mouse နေရာမှာ အစားထိုးသုံးဖို့ ဖန်တီးထားတာပါ။.သူနဲ့ သဘောတရား ဆင်တူတာတွေ ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ သူတိုကတော့ ခု ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ တွေ့နေရတဲ့ Multi-touch screen , Touchscreen, tablet တို့မှာ ထိတွေ့မိကြဦးမှာပါ။Touchpad ကို (The touch pad isabuilt-in substitute foramouse on laptops.) ဒီလို အဓိပါယ် ဖွင့်ဆိုထားတာတွေကို ဖတ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာကို ကျွန်တော် စပီးရေးတဲ့ ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ မိသားစုဖိုရမ်မှာ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီချန်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော် စာမူအတွက်မို့ ချန်ထားခဲ့တာပါ။ ခု ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ eSATA ဆိုတာ External Serial Advanced Technology Attachment ဒါမှမဟုတ် eSATA ကို SATA technologies တွက် external interface လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ HDD (Hard Disk Drive ) တွက် ATA နေရာမှာ အစားထိုး ၀င်လာတဲ့ SATA တွေရဲ့ next generation internal bus interface ပါ။ သူရဲ့ အားသာချက်တွေကို အနည်းအကျဥ်းဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။ eSATA က USB တို့ Firewire တိုနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့ transfer rates က USB 2.0 and FireWire 4000 ထက် သုံးဆ ပိုမြန်ပါတယ်။ USB 3.0 နဲ့ဆိုရင်တော့ တမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ eSATA က ပုံမှာ မြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ့။ သူကို eSATA cables နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုရပါတယ်။ ဒီတော့ eSATA cables ရဲ့ အရှည်နဲ့ မြန်နူံးလေး အကြမ်းဖျင်းကို ကျွန်တော် ဖော်ပြပါဦးမယ်။ အကျယ်သိချင်ရင် How to buyalaptop and Knowledge ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ စာဖတ်သူများ စောင့်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ eSATA cables က အပေါက်ဝ တော်တော်လေး ကျဉ်းပြီး.. အရှည်က 6.56 feet (2 meters) ရှိပါတယ်။ သူကို Desktop မှာ တွဲသုံးတဲ့ HDD တို့ USB တို့ နဲ့ တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ External HDD မဟုတ်ပဲ့ internal HDD တွေကို ဒီ eSATA ကနေ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Desktop တွေမှာတောံ eSATA မပါပါဘူး။ တပ်ပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုရင် PCI card ဆိုဒ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Laptop တိုင်းလည်း မပါပါဘူး။ ပါတဲ့ Laptop ကလည်း ဈေးကြီးပါတယ်။
Fingerprintreader ကိုတော့ Laptop တိုင်းမှာတော့ မပါဝင်ပါဘူး။ ပါဝင်တဲ့ Laptop တွေလည်း ရှိသလို မပါတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ သူကတော့ လက်ဗွေရာကို Scan ဖတ်ပီးတော့ စက်ကို Password ပေးလို့ ရပါတယ်။ fingerprintreader ကို touchpad ရဲ့ ညာဘက်ဘေးလေးနားမှာ တွေ့နိင်ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီပိုစ့်လေးကို ပြန်ပီး အသက်သွင်းပါ့မယ် စာမေးပွဲရှိနေလို့ ရေးလက်စ တွေ ကျွန်တော် ခဏထားထားတာ ကြာသွားတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ကျွန်တော် Hardisk တခုလုံးကို Format ချလိုက်တော့ ရေးလက်စ စာတွေ အုပ် ၄၀ ကျော်လောက်ပါသွားတယ် :S ။ နှမြောတာတော့ ပြောမနေတော့ဘူး။. ဘာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ ပို့စ်ကို ကျွန်တော်သိသလောက်လေး ထပ်ပီး မျှဝေးရင်း အပီးသတ်ရေးဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားရေးပါ့မယ်။
ဒီကောင်လေးကိုတော့ အများအားဖြင့် Peripheral Device တွေနဲ့ ချိတ်စက်ပီး အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ ဒီ Slot ကို သုံးပါတယ်။ Peripheral Device ဆိုတာဘာတွေလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ computer printers, image scanners, tape drives , microphones, loudspeakers, webcams, and digital cameras တွေကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒီ Slot တွေက ခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Slot တွေနဲ့ အရင်က Slot တွေတောင် မတူတော့ပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ Laptop နဲ့ တွဲပီးထွက်လာတဲ့ Slot တွေက ဟိုး အရင်က ထွက်ရှိပီးသား Laptop မှာတဲ့ Slot တွေ ထက် ပိုပီး ကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် အရင်က ထွက်လာတဲ့ Slot တွေမှာ Peripheral Device နဲ့ ချိတ်ပီးအလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ စက်ကို လေးသွားတာတို့ ဟန်းသွားတာတို့တွေ နဲ့ နောက်ထပ် Volt အားတွေကိုပါ ချွေတာ အသုံးပြုနိင်အောင်လို့ digital demands တွေနဲ့ ခု ဒီ Slot တွေမှာ ဖွဲ့စည်းပီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ဒီ Port လေးကိုတော့ တွေ့ဘူးမှာပါ။သုံးလည်း လက်ရှိသုံးနေကြတာပါ။ သူ့ကတော့ အင်တာနက်နဲ့ Network ကို အဓိကထားပီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကွန်ပျုတာတိုင်းမှာ ပါပီးသားပါ။ မပါတာက RJ 11 ခေါင်းပဲ့ ..သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်က ကြိုးဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဖုန်းခေါင်းပေါက်ကို ၀င်ပီး Phone တွေကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ဘာလို့ပါလာတာလည်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ RJ 11 ခေါင်းကလည်း တကယ်တော့ Network ချိတ်ဆက်ပီး အသုံးပြုလို့ ရတာတွေကြောင့်ပါ။ သူ့ကို Wide area network ထိ အသုံးပြုလို့ ရနိင်ပါတယ်လို့ ကကကွန်က ထုတ်တဲ့ စာအုပ်ထဲ့မှာ ဖတ်ဘူးပါတယ်။ အဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည်ချင်တယ်ဆိုရင် Network စာအုပ်များထဲ့မှာပါပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ချက် အနေနဲ့ eSATA ကိုပါ အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အပိုင်း ၁ ကိုတော့ ဒီနေရာမှာပဲ့ နိဂုဏ်းချုပ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၂ နဲ့ ၃ ကို နောက် ရက်မှာ ဆက်တင်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော် Flash အကြောင်းကိုလည်း အပိုင်း ၄ ပိုင်း ခွဲရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အပိုင်း ၃ ပိုင်းကတော့ ရေးပြီးသားပါ။ အပိုင်း ၃ ထိ လည်း မြန်မာမိသားစုမှာ ရေးပြီး ဖော်ပြပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒီ ၃ ပိုင်း လုံးလည်း ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ တွေ့နေရပါတယ်။ Credit မပေးတဲ့ ဆိုဒ်တော့ အတော်များပါတယ်။ ဒါပေ့မယ် စိတ်ထဲ့တော့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်တကယ် မတက်ပဲ့နဲ့ တက်ချင်သလို နာမည်ကြီးချင်သူတွေတွက်တော့ စေတနာ အကျိုးပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်နဲ့ Flash ခရီးစဉ်ဆိုတဲ့ Flash Songs လုပ်နည်း အသေးစိတ်ကိုလည်း ကျွန်တော် ဒီမှာပဲ့ လာပြီး အပိုင်း ၄ အဆုံးသတ်ထိ ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ခွန်သိန်းဇော်ထွန်း February 4, 2012 at 10:38 AM
အခုလို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အထူးဝမ်းသာပါတယ်....။
wai February 4, 2012 at 11:58 PM
အခုလိုဖတ်ခွင့်ရလို့အရမ်းကျေနပ်ပြီးဝမ်းသာရပါတယ်ကျေးဇူးလဲအရမ်းတင်ပါတယ် တစ်ခုလောက်တော့တောင်းဆိုပါရစေ အခုပိုတွေအကုန်လုံးပြီးသွားရင် အဲ့ဒိအပိုင်းလေးတွေက်ိုpdfအဖြစ်သော်လည်းကောင်း စာအုပ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း ထုပ်ပေးပါလား ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တစ်ခါတည်းမှတ်မိပေမယ့် ကျနော်တို့လို့ မှတ်အားမကောင်းတဲ့သူတွေအဖိုတော့ သိမ်းထားချင်လို့ပါ နောင်အခါများမှာလဲအချိန်မရွေးဖတ်လို့ရအောင်လို့ပါ လိုင်းပေါ်ဆိုတော့ လိုင်းရှိနေတော့အချိန်မရွေးဖတ်လို့ရပါတယ်ဆိုပေမယ့် လိုင်းမရှိတဲ့အချိန်တွေကျတော့အဆင်မပြေလို့ပါဗျာ အကိုအနေနဲ့အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် ကူညီပေးအုံးနော်
ral February 27, 2012 at 5:37 PM
အဆင်ပြေရင် pdf နဲ့လိုချင်ပါတယ်။
lional March 9, 2012 at 2:12 PM
clsn May 14, 2012 at 6:51 PM
jarlay May 21, 2012 at 1:06 AM
thank you for your'collection.
sunshine July 13, 2012 at 4:10 PM
အခုလို သိထားတက်ထားတဲ့ပညာလေးတွေကို အားလုံးအတွက်စေတနာထားပြီးဖြန့်ဝေပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
naing linn January 18, 2013 at 8:47 PM
thanksalot our brother
ကွန်ပျူတာချစ်သူ August 23, 2014 at 11:10 AM
ံhardware အပိုင်းတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်graphic မြှင့်တင်တဲ့အပိုင်းကို တင်ပြစေလိုပါတယ်